डिस्चार्ज लगत्तै प्रधानमन्त्री सक्रिय, शनिबार दिनभरी भेटघाटमा सक्रिय « Naya Page
डिस्चार्ज लगत्तै प्रधानमन्त्री सक्रिय, शनिबार दिनभरी भेटघाटमा सक्रिय
प्रकाशित मिति : March 14, 2020
काठमाडौं, १ चैत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डिस्चार्ज भए लगत्तै सक्रिय भएका छन् । गत २१ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीलाई शुक्रबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको थियो । डिस्चार्जलगत्तै शनिबारबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूसँग भेट सुरु गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली शनिबार दिनभरी भेटघाट र छलफलमा दिनभरी जसो व्यस्त भए । प्रधानमन्त्री ओली कम्तीमा चारभन्दा बढी भन्दा बढी बेग्ला बेग्लै भेटघाट र छलफलमा सहभागी भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग शनिबार विहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेट गरी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए । प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक गतिविधिबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
लगत्तै शनिबार नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । भेटमा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेपालपछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्था बारेमा पनि संक्षिप्त कुराकानी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले शनिबार नै रक्षामन्त्री तथा कोरोना रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग पनि भेटघाट र छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको उपचारार्थ छुट्टै अस्पतालको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
महासचिव पौडेल सहित सल्लाहकार टिमसँग प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले शनिबार नै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सहित आफ्ना सल्लाहकार टिसमँग भेटघाट र छलफल गरेका हुन् । महासचिव पौडेल सहित प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण रुपमा स्वस्थ हुन ६ महिनादेखि वर्षदिन लाग्ने प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहले बताइसकेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले यो समयमा सकेसम्म आरम गर्नुपर्नेमा चिकित्सकहरुको जोड छ । बढी भेटघाटमा सक्रिय हुदा संक्रमणको समस्या रहने भन्दै भेटघाटलाई कम गर्न चिकित्सकहरुले जोड दिदै आएका छन् ।
सर्वोच्चलाई प्रचण्डको जवाफ : मेरो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गर्दैन (पूर्णपाठ)
शङ्खमूल त्रिवेणीधाम संरक्षणमा जुटे स्थानीयवासी र धार्मिक संस्था
अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन प्रचण्ड सर्वोच्च अदालतमा
काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अदालतको
घट्यो सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं, १६ फागुन । स्थानीय बजारमा आज पहेंलो धातुको मूल्य रु ५०० ले ओरालो लागेको
काठमाडौं, १६ फागुन । वाग्मती, रुद्रमती र मनोहरा नदीको सङ्गमस्थल शङ्खमूल त्रिवेणीधाममा माघ शुक्ल पूर्णिमादेखि